Ny antony sy ny soritr’aretin’ny meningite. – Noor Health Life
Ny antony sy ny soritr’aretin’ny meningite.
Ankalazaina maneran-tany ny andro maneran-tany ho an’ny meningite ny 24 aprily. Amin’io andro io no karakarain’ny seminera sy fihaonambe samihafa ho fampahafantarana ity tazo ity mba hampahafantarana ny olona ny soritr’aretina, ny antony, ny fitsaboana ary ny fisorohana ity tazo ity. Tombanana fa ny tazo dia mihatra amin’ny olona iray tapitrisa mahery eran-tany isan-taona. Ny meningite dia mety hisy fiantraikany amin’ny sokajin-taona rehetra, na tanora na antitra. Tena ilaina ny fitsaboana ara-potoana, raha tonga amin’ny ambaratonga mampidi-doza ny tazo, dia mety hahafaty ilay marary voan’ny aretina, ka ilaina ny mitandrina.
Ny antony mahatonga ny meningite
Nanao fandaharana tsara indrindra ho an’ny atidohan’olombelona sy ny cerebellum ny zavaboary ary nitahiry azy ireo tao anatin’ny fonon-tsela telo izay mahatonga azy ho voaro amin’ny loza sy aretina isan-karazany.Na ny otrikaretina kely amin’ireo membrane ireo aza dia miteraka aretina maro. Ireo membranes ireo dia mety hisy fiantraikany amin’ny ratra amin’ny loha, ny mikraoba miditra amin’ny lalan-drà, ny areti-mifindra amin’ny orona sy ny sofina ary ny meningite.
Ny soritr’aretin’ny meningite
1. Amin’ny meningite, ny marary voalohany dia voan’ny tazo mahery.
2. Raha voan’io tazo io ilay zaza, dia mitomany foana izy.
3. Tsy misy na inona na inona mahatonga anao te hihinana na hisotro.
4. Rehefa mihamitombo ny tazo dia manomboka mivondrona ilay marary.
5. Mipoitra ny tasy mena amin’ny vatana.
6. Manjavona ny hakamoana eo amin’ny maso.Ny hodi-maso dia mihetsika miadana.
7. Ny iray amin’ireo soritr’aretina lehibe indrindra dia ny tsy fitodihana ny tendany.Tsy sitrana araka ny tokony ho izy ny tendany ary tsy afaka manainga ny tendany ny marary. Inona no loza mety hitranga amin’ny meningite amin’ny ho avy?
Genève: Nasehon’ny tatitra iray navoakan’ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) fa olona iray amin’ny dimy no ho voan’ny aretin’ny sofina amin’ny taona ho avy, noho ny meningite sy ny antony hafa.
Araka ny tatitry ny fampitam-baovao iraisam-pirenena, ny tatitra iray navoakan’ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia nanambara fa olona maro eran-tany no miatrika olana amin’ny fandrenesana.
Tatitra navoakan’ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana
Raha ny nambarany dia mety ho tena matotra tokoa ny firongatry ny meningite sy ny tsy fahampian’ny fahatsiarovan-tena momba izany satria mifandray mivantana amin’ny fihainoana ny meningite.
Araka ny voalazan’ireo manam-pahaizana momba ny fitsaboana, dia misy fiantraikany mafy amin’ny atidoha sy ny selan’ny sofina ny meningite, ka tapaka ny hafatra mankany amin’ny atidoha.
Nilaza ny manam-pahaizana momba ny OMS fa ny fampihenana ny tabataba eny amin’ny toerana be olona sy ny fanomezana fanampiana ara-pitsaboana ara-potoana ihany no ahafahana miatrika io toe-javatra lehibe io.
Ny tatitra voalohany momba ny fihainoana eran-tany navoakan’ny OMS dia milaza fa “ao anatin’ny telopolo taona ho avy, dia hitombo mihoatra ny 1,5% ny isan’ny marenina, izany hoe olona iray amin’ny dimy no hanana olana amin’ny sofina.” ۔
Ny tatitra dia milaza fa “ny fitomboan’ny olana amin’ny fandrenesana dia noho ny fitomboan’ny demografika, ny fahalotoan’ny tabataba ary ny fironan’ny mponina.”
Ny tatitry ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) dia mitanisa ny antony mahatonga ny fihanaky ny sofina vokatry ny tsy fahampian’ny fitsaboana ara-pahasalamana sy ny tsy fahampian’ny mpitsabo any amin’ny firenena ambany fidiram-bola.
Milaza ilay tatitra fa “ny 80%-n’ny olona any amin’ny tany toy izany dia manana olana amin’ny fandrenesana, ka ny ankamaroany dia tsy mahazo fitsaboana, fa ny firenena manankarena kosa tsy mahazo fitsaboana noho ny fitomboan’ny mponina.” Azonao atao ny mandefa mailaka an’i Noor Health Life miaraka amin’ny fanontaniana sy valiny bebe kokoa. noormedlife@gmail.com